Daraasadan waxaay ku saabsantahay khibradda mas'uuliyiinta ee barashada Islaamka ee dugsiga hoose
Baaritaankan waxaa lagu baarayaa khibradaha waalidka ee ku saabsan ee barashada diinta Islaamka ee dugsiga hoose-dhexe ee Finland. Xog -ururinta waxaa loogu jawaabay si qarsoodi ah oo magaca anan la sheegayn.
Jawaabtaadu runtii waa mid qiimo leh si arrinka looga helo aragtida ugu balaaran ee suuro galka ah.
Wakhtiga jawaabta waa la kordhiyey. Waxaad ka qaybqaadan kartaa cilmi-baarista. Waad ku mahadsan tahay jawaabtaada!